Nge nezinwele ubhekene yawo wonke umuntu. Ngokuhamba kwesikhathi, izinwele iba ngaphansi, kanye izinwele ilahlekelwa sikhalo salo ubukhazikhazi. Yini okumele uyenze uma une izinwele enamandla kakhulu fall out?
Okokuqala, kufanele ukuchaza izizathu oholele lokhu isimo izinwele follicle. Nazi eziyishumi sezizathu ezijwayeleke kakhulu ukulahlekelwa ikhanda obukhulu izinwele.
Ukuwohloka futhi iqothukile ngenxa amasosha omzimba singenele, ikakhulukazi abesifazane. Lokhu kwenzeka ikakhulu lapho "ukugqoka" zomzimba noma ziba ngcono yayo ngenxa yezifo ezithathelwanayo noma umthwalo omkhulu, kanye kule izinkathi nokukhulelwa kanye lactation (kwabesifazane).
Uma une izinwele kakhulu fall out futhi esibuthaka sokuzivikela ezifweni, kungenzeka okubhekana naso. Ekhemisi Kufanele uthenge amavithamini nezidakamizwa immunomodulatory, okuncike akhiphe of Echinacea purpurea. "Doping" Good umzimba wakho ukuba ngikhonze njengephayona ezemidlalo noma uhambo ulwandle.
Lapho nokushoda yensimbi hhayi kuphela encishisiwe-hemoglobin, kodwa futhi izinwele kakhulu fall out. Ukudla ukopha esesikhathini kungase kuholele ekubeni eshodayo yensimbi. Ngakho-ke, ngesikhathi esilandelayo indlala isiteleka kufanele Thenga kakhulu amavithamini namaminerali ukusiza ukugcina i ibhalansi elilungile emzimbeni wakho. Ngaphezu kwalokho, kufanele ehlukahlukene Ukudla isidlo sakho sansuku zonke of yenkomo, inhlanzi, isibindi, futhi apula kanye emhlophe juice, oatmeal kanye iphalishi nokunye okufana nokolweni, rye isinkwa.
Ukulahlekelwa izinwele kungenzeka kube umphumela umuthi. Izidakamizwa ezivamile ibangela mphumela omubi imithi Umfutho, nokukhandela imbeleko hormone, ama, abanye antidepressant, isisu kanye aspirin.
Enye imbangela nezinwele kuyinto nokwelashwa ngamakhemikhali, iziyaluyalu hormone. Kufanele uxhumane nodokotela wakho ukuze uthole imithi ukufukula izinwele zikhula zibheke ngakhona.
Izifo we kwesikhumba ekhanda nakho buthaka follicle izinwele. Okokuqala udinga unqobe isifo, bese ukwenza ukubuyiselwa isikhumba ukulinganisela futhi ashukumise izinwele zikhula zibheke ngakhona.
Kubi kwegazi izitsha ikhanda esinye isizathu nezinwele. Nikela kule isifo esimiso senhliziyo nemithambo yegazi, ukuhlukumeza ikhofi kanye nophuzo oludakayo, ugwayi, itiye eqinile.
Kufanele ubuyekeze ekudleni kwakho, ukuphuma ukudla okunempilo.
Ukushoda amavithamini microelements emzimbeni kuholela buthakathaka kuqala, bese ukulahlekelwa izinwele. Kuyadingeka ukuthatha Vitamin izakhiwo, badle izithelo fresh nemifino.
Ukucindezeleka - "elihle" zonke izinhlobo zokugula. "Kukithi yonke yethu isifo nerve" - zingaqhubekela wezwa. It ngempela. nezimo ezicindezelayo babe negalelo elinamandla kakhulu omubi umzimba wethu, esukela inhliziyo elula eziya ziba zimbi ukuba iziyaluyalu emibi kakhulu emzimbeni.
Ukusiza kulesi simo kungenzeka sicashunwa amakhambi, njenge-Mint, noma lemon namafutha. Kodwa uma wena awukwazi ukubhekana nokucindezeleka, kufanele uvakashele udokotela wakho kangangokuthi uye ebekiwe antidepressant wena.
Isimo kwemvelo ishiya okuningi ukuba wayefisa. Futhi nje athole kubi unyaka nonyaka. Isizinda ngemisebe futhi imvula ezahlukene kwesokunxele iminonjana emzimbeni wethu.
Zama ukuba uchithe isikhathi esiningi emoyeni opholile komuzi, ukungcebeleka ngokusebenzisa shady ihlathi epaki zigaba, uma kungenzeka, ezihamba emanzini.
Uma une izinwele fall out, izizathu lokhu kungenzeka ihlanganiswa futhi umthelela amazinga aphakeme okushisa aphansi. Zama ukuvikela ikhanda panamkoy yakho ehlobo nokuthi afudumele cap ebusika.
Kakhulu izinwele okuningi fall out, yini okufanele uyenze ezimweni ezinjalo?
Kukhona ngempela nohlu olubanzi izimonyo nezinwele. buso abahlukahlukene futhi balms, abuyisele operation kahle ekhanda futhi ashukumise izinwele ukukhula, uqinise ama kuzosiza ukunqoba ukugula. serum ngempumelelo kakhulu ukuthi wagcoba ku ekhanda futhi asidingi egeza.
Nobuhle nokucwala ukunikela eziyinkimbinkimbi abakhathalelayo nokuvuselelwa kanye nokuqinisa follicle izinwele. Bayanda ziphoqa ekusebenzeni izinwele transplantation.
Carp Stuffed - inkosi yakwa etafuleni